Krisp: Esory ny tabataba misy eo am-piantsoana ny fihaonambe | Martech Zone
Talata, Aogositra 11, 2020 Talata, Aogositra 11, 2020 Douglas Karr
Ny herinandroko dia feno rakipeo podcast sy antso ho an'ny kaonferansa. Toa matetika kokoa noho ny tsy misy, ireo antso ireo dia misy olona vitsivitsy any izay tsy mahay mahita toerana mangina. Mahatonga ahy ho adala.
Ampidiro i Krisp, sehatra iray mampihena ny tabataba ao ambadika. Krisp dia manisy sosona fanampiny eo anelanelan'ny mikrophone / mpandahateny ara-batana anao ary ny fampiharana an'ny kaonferansa, izay tsy mamela ny tabataba handalo.
Miorina amin'ny tabataba 20,000 50,000 isan-karazany, mpandahateny 2,500, ary feo an-tsary XNUMX, i Krisp dia nianatra ary namorona tambajotra neural antsoina hoe krispNet DNN. Nanatsara izany izy ireo tamin'ny fanampiana ny anay saosy miafina, ary ny valiny dia fanodinana feo majika izay afaka mamantatra sy manaisotra ny tabataba rehetra.
Krisp dia centric privacy, ary koa satria ny fikirakirana feo rehetra dia mitranga mivantana amin'ny fitaovanao.
Aiza no ilaina ny fanafoanana ny tabataba any aoriana:
matihanina miasa amin'ny toeram-piasana an-trano na ampahibemaso
Mpampianatra an-tserasera afaka mankafy kilasy lavitra mamokatra tsy misy tabataba miaraka amin'ireo mpianatra
Podcasters afaka mirakitra podcast tsy misy tabataba avo lenta ho an'ny mpihaino anao
Ekipa lavitra afaka manana fivoriana tsy misy tabataba
Ivotoerana fiantsoana dia afaka mampitombo ny famokarana agents rehefa miasa avy any an-trano (HBA) na avy amin'ny birao misokatra
Krisp dia azo ampitaina am-pilaminana eo amin'ny sehatry ny orinasa na ampidirina ao amin'ny sehatra sy fitaovana ampiasanao ny SDK. Raha ny tena izy, ny rindrambaiko teknolojia manana feon'ny Krisp® AI dia ampidirina amina fitaovana maherin'ny 100 tapitrisa ary efa nihatsara tamin'ny 10 miliara minitra ny fifandraisana am-peo.
Sintomy maimaim-poana i Krisp
Tags: aitabataba ao ambadikafanafoanana ny tabataba any ambadikakrispny tambazotran'ny fahasalamanafanafoanana ny tabataba